ငါပုံမှန်မဟုတ်သောနေရာများ, ရိုက်နှက်လမ်းကြောင်းမှကြိုက်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟာခရီးသွား feel ည့်သည်တစ်ယောက်လိုခံစားရတာကိုနှစ်သက်သည်။ သင်လည်းအလားတူဖြစ်ပါကကမ္ဘာကြီးသည်လူနေထူထပ်။ လှပသောနေရာများနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ သူတို့ထင်သလောက်မဝေးပေ၊ ဥပမာအားဖြင့် အာဖရိကတိုက် သူကငါတို့ကိုစောင့်နေတယ် အီသီယိုးပီး.
ဒီဟာကဘာလဲဒီနေ့ကြည့်ရအောင် အာဖရိကနိုင်ငံ ယခင်က Abyssinia အဖြစ်လူသိများ။
အီသီယိုးပီး ၎င်းသည်အာဖရိကချိုင့်ဟုခေါ်သည့်နေရာတွင်တည်ရှိသည်။ Eritrea ၏လွတ်လပ်ရေးအပြီးတွင်၎င်းတွင်ကမ်းရိုးတန်းမရှိ၊တိုက်ကြီးတွင်လူ ဦး ရေအထူထပ်ဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သည် နိုင်ဂျီးရီးယားနှင့်အီဂျစ်နောက်ကွယ်မှ။ ၎င်းသည်ဆိုမာလီ၊ ဆူဒန်နှင့်တောင်ဆူဒန်၊ ဂျီဘူတီနှင့်အီရီထရီးယားနှင့်နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသည်။
သမိုင်းက၎င်းသည်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့်မတူကြောင်းပြောသည် ကိုလိုနီဘယ်တော့မှသိရသည် ဥရောပနိုင်ငံများအကြားဖြန့်ဖြူးသည့်ကာလများ၌ပင်၎င်းသည်အမြဲတမ်းအမြဲတမ်းလွတ်လပ်မှုရှိခဲ့သည်။ အတော်လေးအောင်မြင်မှု။ ဒါ့အပြင်ဒါကငါတို့သိတယ် ခရစ်ယာန်နိုင်ငံ အချိန်ကြာမြင့်စွာ။
၎င်း၏မြို့တော်သည်အက်ဒစ်အဘာဘာမြို့ဖြစ်သည် အချို့သောအကြောင်းပြချက်များကြောင့်သင်သည်အဲသယောပိလေကြောင်းလိုင်းကိုအလံသယ်ဆောင်သူအဖြစ်ယူဆောင်လာပါကထိုနေရာတွင်သင်ရပ်နားလိမ့်မည်။ တိုင်းပြည် ၎င်းတွင်ဘိုလီးဗီးယားနှင့်တူသောနယ်မြေတစ်ခုရှိသည် နှင့်၎င်း၏ရှုခင်းများကို Savannas နှင့်တောတောင်များ၊ သဲကန္တာရများနှင့်မြက်ခင်းပြင်များဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာများရှိသည်။
အီရီထရီးယားနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးသည်စီးပွားရေးကိုအခြေခံသည် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးအထူးသဖြင့် ကော်ဖီလူ ဦး ရေ၏အစိတ်အပိုင်းအများစုနေထိုင်သောပြည်ပသို့တင်ပို့ရောင်းချခြင်း။ မည်သည့်တင်ပို့သည့်နိုင်ငံမဆိုကဲ့သို့၎င်းသည်အတက်အကျများရှိပြီးနိုင်ငံတကာစျေးကွက်များပေါ်တွင်များစွာမူတည်သည်။ Eritrea နှင့်အတူဖော်ရွေသောဆက်ဆံရေးအပြင်။
အီသီယိုးပီးယားမှာလူတွေဘယ်လိုနေလဲ။ လွန်ခဲ့သော ၄ နှစ်ကသန်းခေါင်စာရင်းကပြသခဲ့သည် လူ ဦး ရေသန်း ၉၀ ကျော်၏လူ ဦး ရေ နှင့်အမျိုးမျိုးသောလူမျိုးစုများ။ လူ ဦး ရေ၏ ၅၀% မျှသာစာတတ်မြောက်ပြီးအာရဗီနှင့်အင်္ဂလိပ်စကားအပါအ ၀ င်ဘာသာစကားများစွာပြောဆိုကြသည်။
တိုင်းပြည်ကနေအံ့သြဖွယ်ရှုခင်းများရှိပါတယ် တောင်များ သည်အထိမြောက်ဘက်၌တိုက်ခန်း ရောင်စုံဆားနှင့်မီးတောင်များ။ ရှိသည် ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုအပျက်အယွင်းများ ၏မြို့ကဲ့သို့ Axum, Las Lalibela ၏ကျောက်အသင်းတော်များ ဒါမှမဟုတ်နဂျီရှီဗလီ ...
ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့အီသီယိုးပီးယားကိုဖြတ်ပြီးဘယ်ခရီးကိုသွားနိုင်မှာလဲ။ ကြှနျုပျတို့ ... လုပျနိုငျပါတယျ ကျွန်တော်တို့ကိုမြောက်ဘက်ယူတဲ့သမိုင်းလမ်းကြောင်းကိုလုပ်ပါ။ သိသာထင်ရှားတဲ့ကျနော်တို့မြို့တော်နှင့်အတူစတင်ရမယ်, Addis Ababaအာဖရိကသမဂ္ဂ၏ဌာနချုပ်။ ၎င်းသည်အမြင့် ၂,၃၃၅ မီတာရှိပြီးရာသီဥတုအကြားကောင်းမွန်သောရာသီဥတုရှိသည် 21 နှင့်24ºကောင်းကြီးမင်္ဂလာတစ်နှစ်။
ဒီမှာမြို့တော်၌ရှိ၏ အမျိုးသားပြတိုက် ပြီးတော့မင်းရဲ့အတွင်းမှာလူသားရဲ့ကျော်ကြားတဲ့ဘိုးဘေးကိုရှာတွေ့တယ်၊ လူစီ၊ သူမ၏အနှစ် ၃.၂ သန်းနှင့်အတူ။ အီတလီစတိုင်ရပ်ကွက်ဟောင်းလည်းရှိတယ်။ တောင်ကြီးမြို့သူ့ကိုငါးနှစ်တာအီတလီအလုပ်အကိုင်အတိုချုပ်မှတ်မိစေ။ ဤလမ်းများတွင် Hotel Taitu သည်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသောကော်ဖီနှင့် ၁၉၀၀ လေထုနှင့်အတူဟောင်းနွမ်းပြီးကြော့ရှင်းသည်။
လမ်းကြောင်းကဆက်သွားနေ ဦး မည် Gondar။ အနီးနားမရောက်သေးဘူး၊ တာနာရေကန်ပေါ်ရှိ Bahir Dar မြို့ကိုဖြတ်ကျော်ပြီး ၂ ရက်ခရီးသွားကားတစ်စီးဖြစ်သည်။ ဒီမှာလှပသောရေကန်များနှင့် အပြာရောင်နိုင်းလ်ရေတံခွန် အမြင့်မီတာ 40 ကျော်။ Gondar မှာဘဏ္treာများစွာရှိသည်။ ၁၇ ရာစုမှစတင်ခဲ့သောရဲတိုက်များဥပမာအားဖြင့်၊ ရက် ၂ ရက်နေသင့်သည်။
ထို့အပြင်မြို့သည်ဖို့တံခါးပေါက်ဖြစ်ပါတယ် Simien တောင်တန်းများ ခရီးသွားများသည်အမျိုးသားဥယျာဉ်၏အတွင်းပိုင်းကို ဖြတ်၍ ခရီးများစွာသွားကြသည်။ ဤလေ့လာရေးခရီးများကိုပန်းခြံ၊ ဒက်ကာအနီးရှိမြို့တွင်စီစဉ်ပေးသည်။
ပန်းခြံအတွင်း၌ပင်အိပ်ပျော်နိုင်သည်၊ ဈေးပေါသောစခန်းတစ်ခုရှိသည်။ Simien Lodge သည် ၃,၂၆၀ မီတာအမြင့်ရှိသော်လည်းကွဲပြားသောစျေးနှုန်းဖြင့်ဖြစ်သည်။ ဒေဗက်ကနေသင်ရိုက်ထည့်ပါ Tigray ဒေသတစ်ချိန်က Axum နိုင်ငံ၏နယ်မြေ (၎င်းသည်ဤတွင်နှင့်အိမ်နီးချင်းအီရီထရီးယားသို့တိုးချဲ့ခဲ့သည်) နိုင်ငံများဖြစ်သည်။ The Axum မြို့ Stelae ပန်းခြံနှင့်နန်းတော်များရှိပြီးလှပသောနေရာဖြစ်သည်။ မင်းရဲ့ဘဏ္asureာလား The ပtheိညာဉ်သေတ္တာ ထိုအရာကိုကျွန်ုပ်တို့၏မာရိဒီဇိအုန်၏ကျွန်ုပ်တို့၏အမျိုးသမီး၏ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတွင်ထားရှိသည်။
လမ်းကြောင်းကအရှေ့ဘက်ကိုလှည့်ပြီးဖြတ်သွားတယ် Adua နှင့် Yeha (ဤတွင်Emကရာဇ် Menelik ၁၉ ရာစုနှောင်းပိုင်းတွင်အီတလီတပ်များကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်) နှင့်ရောက်ရှိခဲ့သည် Debre Damo။ ၎င်းသည် ၁၅ မီတာရှည်သောသားရေကြိုးဖြင့်တက်သောကြောင့်အမျိုးသမီးများ (သို့) အလွယ်တကူပင်လယ်ပြင်သို့အလွယ်တကူ ၀ င်ရောက်နိုင်သောလူများကခွင့်မပြုသောတောင်တန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ တန်ဖိုး
နောက်တစ်ခုကတော့ Adigrat ပါ။ အီသီယိုးပီးယားနှင့်အီရီထရီးယားအကြားငြိမ်းချမ်းရေးလက်မှတ်ထိုးပြီးနောက် ပို၍ သာယာသည်။ ဒီကနေ Simien, Ankober နဲ့ Lalibela တောင်တန်းတွေကနေတောင်တက်ခရီးစဉ်ကိုငှားရမ်းနိုင်ပါတယ်။
တောင်ဘက်သို့ ဦး တည်နေသည်မြေပုံပေါ်တွင်ပေါ်သည် တီဂေးမြို့၏မြို့တော် Mekelleသိရန်နည်းနည်းရပ်တန့် အဆိုပါ Gheralta massif ၏ကျောက်အသင်းတော်။ Mekelle တွင်သင်eစီစဉ်နိုင်သည်ဆားတိုက်ခန်းနှင့် Erta Ale မီးတောင်မှ xcursions သော Danakil ကန္တာရ၌တည်ရှိ၏။ ဤတွင်သင်ခရီးသွားခြင်းဖြင့်သာလွတ်လပ်စွာသွားနိုင်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်နှစ်ရက်မှသုံးရက်အတွင်းကြာသည်။
Lalibela တောင်ဘက်ကို ဦး တည်နေသည်သင်တို့သည်ယခင်အသင်းတော်များကိုနှစ်သက်ကြလျှင်၊ Lalibela အီသီယိုးပီးယားရှိခရစ်ယာန်ဘာသာ၏နှလုံးသားဖြစ်သည် နှင့်အကောင်းဆုံးစံနမူနာအနည်းဆုံးလေးရက်ကြာရှာဖွေစူးစမ်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အနီးအနားမှာ Abuna Yoseph လိုတောင်တက်လို့ရမယ့်တောင်တန်းတွေရှိတယ်။
Y ဒီမှာ Lalibela ၏ကျောက်ဆောင်နှင့်သမိုင်းရှုခင်းများမြောက်ဘက်ဖြတ်သန်းသမိုင်းဝင်လမ်းကြောင်း၌တည်၏ အီသီယိုးပီးယားမှ, ကောင်းပြီ, သင်ရှည်လျားသောဘတ်စ်ကားခရီးစဉ်ကိုရှောင်ရှားရန်, Addis Ababa သို့ပျံသန်းယူနိုင်ပါတယ်။ လေယာဉ်ခရီးစဉ်ကတစ်နာရီလောက်ပဲရှိသေးတယ်။
အီသီယိုးပီးယားကိုဖြတ်ပြီးခရီးသွားရတာအတော်လေးကြီးမားတဲ့တိုင်းပြည်တစ်ခုဖြစ်လို့လွယ်ကူလား၊ အန္တရာယ်ကင်းလားဆိုတာသင်စဉ်းစားမိလိမ့်မယ်။ ကောင်းပြီ၊ ဟုတ်တယ်၊ Ethiopian လေကြောင်းလိုင်းဖြင့်သင်နိုင်ငံသို့ရောက်ရှိပါကတစ်ချိန်တည်းမှာကြိုတင်စာရင်းသွင်းခြင်းအားဖြင့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်းနှင့်ပြည်တွင်းလေကြောင်းလိုင်းများကစျေးသက်သာသည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ဒီမှာခေါ်တဲ့မြို့ကြီးတွေကြားမှာသွားနေတဲ့အသေးစားလူတန်းစားတွေကိုသုံးနိုင်ပါတယ် Abu dulaသို့သော်ခရီးသွားရန်အလုံခြုံဆုံးနည်းမှာဝေးလံသောခရီးကိုယူရို ၁၀ ဘတ်ကျော်ဖြင့်သွားသော Skybus သို့မဟုတ် Selam ကုမ္ပဏီများမှဘတ်စ်ကားများကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။
မြို့ကြီးများအတွင်းပိုင်းကိုရွှေ့ဖို့ရှိပါတယ် လမင်း, စိတ်ကြိုက် Isuzu အမှတ်တံဆိပ်ဘတ်စ်ကား။ သူတို့ကဘတ်စ်ကားဂိတ်ကနေထွက်သွားတယ်၊ Terra ဘတ်စ်ကားသူတို့ကနှေးတယ်၊ ဈေးပေါတယ်၊ လက်မှတ်တွေကိုပြည်တွင်းမှာရောင်းကြတယ်။ ကျေးရွာများတွင်ခေါ်သည် tuk-tuks ရှိပါတယ် bajajနှင့်တခါတရံတွင် bicolor အသေးစား၊ အပြာနှင့်အဖြူရောင်။
စဉ်းစားတဲ့အခါ နေရာထိုင်ခင်းအရာအားလုံးရှိပါတယ်စျေးကြီးပြီးစျေးပေါတဲ့ဟိုတယ်တွေ၊ စခန်းတွေနဲ့ကျောပိုးအိတ်တွေ။ ခရီးသွား dest ည့်သည်အများဆုံးနေရာတွင်ဟိုတယ်များကိုနိုင်ငံတကာမီနူးဖြင့်ဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်တွေ့နိုင်သည်။ သို့သော်အခြားနေရာများသို့သွားသည်နှင့်အမျှကမ်းလှမ်းမှုရှားပါးသည်။ အမြဲတမ်းတွန်းလှန်နေသောပုလင်းရေသယ်ပြီး၎င်းတို့သည်ဆူညံသံကိုနှစ်သက်သောကြောင့်နားကြပ်များကိုပင်အကြံပြုသည်။
ကျေးဇူးပြု. သတိပြုပါ: ဇန်နဝါရီလ ၇ ရက်နေ့တွင်အီသီယိုးပီးယားသည်ခရစ္စမတ်ကိုကျင်းပသည်Ganna သို့မဟုတ် Genna ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အရေးကြီးသောရုံးပိတ်ရက်ဖြစ်သည်။ အရမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ် ဓလေ့ထုံးတမ်းများနှင့်ဓလေ့ထုံးစံများကိုသက်သေခံသည် ယဉ်ကျေးမှုအရယဉ်ကျေးမှုအရလည်းကောင်း၊ Timkat ပွဲတော်လူကြိုက်များသောအားဖြင့်လည်း။ ၎င်းသည်ဂျော်ဒန်မြစ်တွင်ယေရှုနှစ်ခြင်းခံသည့်ပွဲကိုသြသဒေါက်စ်ခရစ်ယာန်ဘာသာ၏ပွဲတော်ဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးတော့ အီသီယိုးပီးယားသည်အလွန်စျေးကြီးသောနေရာမဟုတ်ပါ။ ပန်းခြံများသို့ ၀ င်ခွင့်အဖိုးအခများသည်စျေးသိပ်မကြီးသော်လည်းလမ်းပြများ၊ အစောင့်များနှင့်အခြားသူများကိုပေးဆောင်သောကြောင့်စီစဉ်ထားသောခရီးများကဘတ်ဂျက်ကိုမြှင့်တင်ပေးသည်။ အဲဒါကိုစိတ်ထဲမှာထားပါ။ ပြောခဲ့တာတွေအားလုံးကခင်ဗျားတို့ဟာအရှေ့တောင်အာရှလိုနေရာမျိုးကိုရောက်လိမ့်မယ်လို့မထင်ပါနဲ့၊ အီသီယိုးပီးယားကစျေးပေါနေတုန်းပဲ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » အာဖရိကတိုက် » အီသီယိုးပီးယားသို့သွားရန်